ESI EDEBE VIDIYO SITE NA KAMERA WEEBỤ NA KỌMPUTA - WINDOWS - 2019
Maka mfe ya niile, ime ka Windows OS rụọ ọrụ nwere ike ịbụ ọrụ na - agaghị ekwe omume maka onye ọrụ na - enweghị uche, ebe ọ bụ na njehie a nwere ike ịda na nwere ihe doro anya. Anyị ga-etinye ihe a n'ime otu n'ime ọdịda dị otú ahụ na koodu 0x80072f8f.
Ighazi njehie 0x80072f8f
Iji malite, nyochaa nkenke nke usoro mmeghe. Sistemụ arụ ọrụ anyị na-eziga arịrịọ na ihe nkesa Microsoft raara onwe ya nye ma nweta nzaghachi kwesịrị ekwesị. Ọ bụ n'oge a na njehie nwere ike ime, ihe kpatara ya na data ezighi ezi na-ebute na ihe nkesa ahụ. Nke a nwere ike ime n'ihi nwube oge ma ọ bụ ntọala netwọk. Ntinye aka nke ọma nwere ike imetụta nje virus, usoro ihe omume na ndị ọkwọ ụgbọala, na ọnụnọ nke "mmezi" na ndekọ ndekọ usoro.
Tupu ịmalite ịdọ aka ná ntị, ịkwesịrị ijide n'aka na ọnọdụ niile dị mkpa maka usoro nkịtị nke ọrụ ahụ mezue.
Gbanyụọ antivirus, ma ọ bụrụ na arụnyere na PC gị. Ihe omume ndị a nwere ike igbochi ịchọta ozi na inweta nzaghachi na netwọk ahụ.
Melite onye ọkwọ ụgbọ ala netwọk, dịka software nwere ike ime ka ngwaọrụ ghara ịrụ ọrụ.
Gụkwuo: Otu esi emelite ndị ọkwọ ụgbọala
Gbalịa ịrụ ọrụ mgbe e mesịrị, n'ihi na ihe nkesa ahụ nwere ike ọ gaghị adị adị ma ọ bụ n'ihi ihe ọzọ.
Lelee na ọnụọgụ nọmba nọmba ikikere abanyela n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na ị jiri data onye ọzọ, buru n'uche na isi nwere ike ịdọrọ.
Mgbe ihe niile a n'elu mezuru, anyị na-aga n'ihu n'iwepụ ihe ndị ọzọ.
Ebumnuche 1: Oge oge
Oge nkwụsị nwere ike ịkpata ọtụtụ nsogbu. Mwube ndị a dị mkpa karịsịa maka nghazi ngwanrọ, gụnyere os. Ịdịiche nke ọbụna otu nkeji ga-enye ihe nkesa ahụ ka ọ ghara ịza gị azịza. Ị nwere ike idozi nsogbu a site na iji aka gị edozi ntọala, ma ọ bụ site na ịgbanye mmekọrịta mmekọrịta na akpaka site na Ịntanetị. Ntuziaka: jiri adreesị time.windows.com.
More: Mekọrịta oge na Windows 7
Ebumnuche 2: Ntọala netwọk
Ntọala netwọk ezighi ezi nwere ike ime ka kọmputa anyị, site na echiche onye nkesa, iziga arịrịọ ndị na-adịghị mma. N'okwu a, ọ dịghị mkpa ihe ntọala kwesịrị "gbagọrọ agbagọ", ebe ọ bụ naanị na anyị kwesịrị ịtọgharịa ha na ụkpụrụ mbụ.
Na "Iwu iwu"na-agba ọsọ dịka onye nchịkwa, anyị na-eme ihe anọ dị n'aka.
More: Otu esi eme ka "Line Line" dị na Windows 7
netsh int ip reset niile
Iwu nke mbụ resigharịrị Winsock ndekọ, nke abụọ mere otu na TCP / IP, onye nke atọ na-egbochi onye nnọchiteanya ahụ, nke anọ ejiri cache DNS.
Rụgharịa igwe ma gbalịa ime ka usoro ahụ rụọ ọrụ.
Ebumnuche nke 3: Ntọala edebanye aha na-adịghị
Windows ederede nwere data iji jikwaa usoro niile n'ime usoro. Dị ka ọ dị, enwere igodo, "ikpe mara" na nsogbu anyị ugbu a. Ọ ghaghị ịtọgharịa, ya bụ, gosi OS na njedebe oke ahụ nwere nkwarụ.
Mepee edetu edetu n'ime ụzọ ọ bụla dịnụ.
Ihe ndi ozo: Otu esi mepee edetu ederede na Windows 7
N'ebe a, anyị nwere mmasị na isi ihe na aha ahụ
Anyị pịa ya ugboro abụọ na n'ọhịa "Uru" dee "0" (efu) n'enweghị utu aha, wee pịa Ok.
Mechie nchịkọta akụkọ ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, iji dozie nsogbu ahụ na mmalite nke Windows 7 dị mfe. Soro usoro niile dị mkpa dị ka o kwere mee, karịsịa mgbe ị na-edezi ndekọ ahụ, ma ghara iji ụda ohi.